Vaovao momba ny Delta Engineering: hetsika, fairs, newsletter
Misy hatrany ny zava-baovao tsy maintsy hiaina ao amin'ny Delta Engineering. Na fampivoarana vaovao na manavao ny milina efa misy eo amin'ny fiaraha-miasa akaiky amin'ny mpanjifantsika.
Te hampiasa ve ianao hatramin'ny farany? Safidio ny iray lohahevitra eto ambany raha mila fampahalalana bebe kokoa:
Delta Engineering amin'ny haino aman-jery
MANORANA NY SAMPANA FANAVOTANA PLASMA
Ampidiro ny sary an-gazety
Fitaovana plastika Delta
Ny firakotra plasma, izay efa nampiasaina hatrizay hitsaboana ny tampon'ny tavoahangy zava-pisotro, dia tsy ho an'ny orinasa misotro zava-pisotro mahery fotsiny. Ny fomba, izay azo ampiasaina hanatsarana ny sakana amin'ny tavoahangin'ny PET, dia manome tombony ihany koa amin'ny famokarana vokatra HDPE sy kaontenera lehibe.
Ny plasma dia iray amin'ny fanjakana efatra, miaraka amin'ny solika, ranoka ary entona. Ny milina fanakonana vaovao an'ny Delta Engineering dia manatsara ny fametrahana setroka etona simika (PECVD).
Ny tombony azo amin'ny takelaka plasma
Ny firafitry ny plasma dia fomba iray azo ampiasaina amin'ny teknolojia multilayer, manome tombontsoa isan-karazany. Raha ampitahaina amin'ny teknolojia multilayer dia lafo kokoa ary maharitra ihany koa amin'ny fomba fijery tontolo iainana.
Ny teknolojia coating dia manamboatra ny lisitry ny fanodinana am-pahombiazana sy mahomby kokoa, dingana ilaina amin'ny toekarena boribory.
Tsindrio Eto hamaky ilay lahatsoratra.
UDK450 MISY INDRINDRA 1 2 MAKA XNUMX XNUMX MACHINE
Ny fampidirana rafitra lozisialy UDK 450 ao amin'ny milina. Ny rafitry ny safidy dia mampiasa rafi-pitaterana volavolan-tsivana misy haingam-pandeha ho an'ny volavolan-kery haingana mba hahafantarana haingana sy mandeha ho azy ary handavana ireo boaty misy microcracks.
Fividianana vidiny sy ny habaka. Ny fampidirana ilay rafi-pandehanana amin'ny leak ao anaty feon'ny masinina dia mitahiry toerana ary somary lafo kokoa noho ny mividy manokana ny rafitra.
TRANO FAMPISEHOANA NY FIVORIANA MAIMAINA
Misintaha ny famoahana gazety ho antontan-taratasy PDF
Ny coater vaovao an'ny Delta Engineering dia manamboatra takelaka kely amin'ny tavoahangy mba hamahana olana maromaro izay matetika misy fiantraikany amin'ny tavoahangy Pet amin'ny famenoana tsipika. Miditra anaty conveyor iray ny bottles, avy eo dia voasintona amin'ny tendany ary diso miaraka amin'ny takelaka manohitra ny static alohan'ny hamerenany ny tavoahangy maina hamoahana ny môtô mba hivoaka ny milina amin'ny vidiny 8,000 tavoahangy.
Ilay masinina, izay manao ny asa amerikanina amerikana avaratra ao amin'ny NPE2018.
Nivoatra ny kalitao vokarina sy ny asa famokarana malefaka. Ny bottles tsotsotra amin'ny coater dia tsy dia mifanenjika eo anelanelan'ny mpitari-dalana, nanatsara ny fahamaizana, ny marika scuff kely ary kely kokoa ny static. Ireo mpampiasa dia afaka manao fanovana haingana sy mora, handraisana ny siny hoditra isan-karazany. Koa, ny dingana vita amin'ny masinina dia mandaitra, mampihena ny fanjifana coating.
Ny injenieran'ny varotra Danny Stevens dia mpandahateny mpitsidika ihany koa: Plasma coating - fanadihadiana tranga ho an'ny mpanjifa
(Talata 12 Oktobra amin'ny 4.30 hariva)
daty 11th - 13th Oktobra 2021
Sehatra fampirantiana Booth # 49
Location Crowne Plaza Atlanta Perimeter ao amin'ny ravinia | Atlanta, GA - Etazonia
Official namany Sary https://www.blowmoldingdivision.org/abc-2021-overview
Consul Général de Belzika any Atlanta mitsidika ny Delta Engineering Inc.
Famerenan'ny hetsika Delta Engineering ao amin'ny NPE
daty 7 - 11th Enga anie 2018
Sehatra fampirantiana S18058
Address Orlando, Florida Etazonia
Solontena Belzika any amin'ny biraontsika avy any Atlanta